Nezvedu - Guangdong Shengte Electric Co., Ltd.
Guangdong Shengte Electric Co., Ltd. yakavambwa muna Ndira 19, 2011. Iyo iri muPamusoro-tech Zone, Danzao Town, Nanhai Dunhu, Foshan Guta, iro rine nyore kutakura uye yakanaka nharaunda. Isu tiri bhizimusi rekuvandudza rinotarisa pane yekuparadzira simba girini, kuchengetedza simba uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Isu tinogadzira muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwesimba rinoshandura uye rakaoma-mhando shanduri. Iri rinoshanda timu re shengte ine yepamusoro kugadzira uye kugadzira tekinoroji, hunyanzvi dhizaini, nekuchenjerera kugadzira kweichi chigadzirwa. Panguva imwechete unotora ruzivo rwakapfuma mukuongorora, kuitira kuti mhando yezvigadzirwa ivimbiswe.
Uye ine yakakwira nhanho yevakuru sainzi uye tekinoroji timu, vanopfuura vashandi ve100, pakati pavo vanopfuura makumi maviri vakuru uye vepakati tekinoroji vashandi. Chido chekutanga chekugadzwa kwebhizimusi ndechekugadzira yekutanga-kirasi zvigadzirwa, mhando yepamusoro, kuvimbika kwemabhizinesi akajeka, iye zvino muvambi wechishuwo chekuva chechokwadi.
Tine yakakwana yekugadzira uye yekugadzirisa michina, yakakwana bvunzo uye kuona nzira. Iine makore anopfuura gumi ekuziva ruzivo uye yakasimba zvinhu uye hwaro hwehunyanzvi, iro bhizinesi rine nzvimbo yekuvaka yemamirimita zviuru gumi nezviviri. Iyo kambani yakafambira mberi kwepasirese mwero wevhavha, yakakomberedzwa michina, coil ichitenderera michina, otomatiki bvunzo michina.
Kugutsikana kwevatengi ndiyo nzira yedu chete, inomhanya kuburikidza nedhizaini, kugadzirwa, mushure mekutengesa sevhisi mudanho rega rega. Chete kana vatengi vakagutsikana nezvangu zvigadzirwa, kuti tigova vakajairwa munharaunda kuhwina. Kubatana kwerubatsiro rwemagariro uye bhizinesi rekubatsira ndicho chinangwa chekambani. Vese vashandi vekambani mukuomerera, kuzvipira, kuvimbika, kodhi yebasa yekuzvibata, anoda kusimbisa nekuchengetedza kubatana kwepedyo nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Tinogamuchira shamwari dzose dzinosanganisira itsva uye yekare yekushanyira nemwoyo wose.
Mumunda wekugoverwa kwesimba kwesimba, iyo kambani inopa yakasanganiswa simba dstribution mhinduro, pamwe neyakagadzirwa tekinoroji zvigadzirwa uye zvemhando yepamusoro zvinotsigira masevhisi, zvinoenderana nemaguta ekuparadzira magetsi network, yekumaruwa magetsi grid shanduko, mataundi emumusha simba rekushandisa, yakazara simba kuchengetedza kwe kushandiswa kwesimba kwemaindasitiri, chirongwa chekuchengetedza magetsi, nezvimwe.
Kwemakore, zvigadzirwa zvedu zvinonyanya kuita se: mafuta-akanyudzwa transformer S11, S13, epoxy resin kukanda yakaoma transformer SCB10, SCB11, pakati payo SCB11 iri rakavhurika transformer. kuchinjisa uye yakakwira uye yakaderera magetsi akazara michina yemagetsi zvichingodaro.